Ihe mmuta 12 sitere na oke nwe ya na ahia | Martech Zone
Mmezu nke usoro ahia di uku bu otutu ihe di iche. Enweghi atụmatụ zuru oke na atụmatụ dị ogologo oge, ahịa agile mgbalị nwere ike imebi ụdị akara. Ma iji nwayọ nwayọ na ahia ahia nwere ike imeri otu. Otu ebe dị n'etiti bụ ihe ịga nke ọma, na-achọ ịnọgide na-elekwasị anya na ebumnuche ogologo oge nke nzukọ a, mana ịnwe ihe onwunwe nwere ike ịgbanwe ụzọ na atụmatụ na ezigbo oge ka nsonaazụ na-agbanwe.
Emechara m ịgụ Oke nwe: Otu US Navy SEALs si edu ma merie. Ọ bụ nnukwu ọgụgụ ihe mmụta n'ọgbọ agha na otu esi etinye ha n'ọrụ mbọ azụmaahịa kwa ụbọchị. Dịka onye agha mmiri, echere m na enweghị m mmasị na akwụkwọ a. Ma dika onye nwe ahia, enweghi m ike ikwenye karie ihe m mutara na otu ha si emetụta ahia m.
Okwu nke otu peeji wepụtara na akwụkwọ ahụ ka m na-agụ ha. Banyere ndị dere akwụkwọ a, aga m agụgharịrị isi okwu nke ndu ma tinye ha n'usoro mgbasa ozi nke otu nzukọ:
Goals - nyochaa ozi nke ahịa, ịghọta otu esi emetụta ụlọ ọrụ gị, ndị gị, na mbọ gị. Chọpụta ma kwupụta ozi ahịa gị na njedebe steeti maka mkpọsa ọ bụla.
Resources - chọpụta mmefu ego, ndị ọrụ, akụ, akụrụngwa, ndị ndụmọdụ, na oge dị maka mkpọsa ọ bụla.
Me atụmatụ - megharia usoro atumatu, nye ndi okacha-amara nke usoro obula ma obu atumatu iji nyochaa ihe omume.
nhọrọ - chọpụta mkpọsa kachasị mma, ịdabere na ịhọrọ mfe mkpọsa na itinye uche n'ihe ebe ha ga-enwe nnukwu mmetụta.
ike - ndị ọkachamara n'ahịa ịzụlite atụmatụ maka ọwa ahọrọ na atụmatụ ha nwere nka na ahụmịhe.
Mmetụta - Mee atụmatụ maka nsogbu dị iche iche site na usoro ọ bụla nke mkpọsa ahụ. Kedụ ka ị ga - esi bulite nsonaazụ dị ka mkpọsa a na-egbu? Kedu ihe bụ usoro ma ọ bụrụ na ihe agahie?
Ize - melata ihe ize ndụ ndị nwere ike ịchịkwa dị ka o kwere mee. Enwere usoro nchịkwa, ndezi, na nnabata nke enwere ike itinye n'ọrụ iji hụ nrube isi?
Na-ekenye ọrụ - mee ka ndị ọkachamara gị nwee ike ime atụmatụ nke atụmatụ ahụ mgbe ị nwere ike ịla azụ ma na-eduzi usoro ahụ dum. Ọ bụ ọrụ gị iji hụ na ezere nkwekọrịta, ma na-etinye ihe onwunwe iji hụ na ịga nke ọma na ozi ọma.
Nyochaa - Na-enyocha ma jụọ atụmatụ ahụ megide ozi na-apụta iji hụ na ọ gara n'ihu ịrụ ya.
Brief - ikwuputa atumatu a nye ndi nile sonyere ya ma kwado ihe ndi ozo, na-ekwusi ike ebumnuche ndi ndu.
Jụọ - jụọ ajụjụ ma tinye aka na mkparịta ụka na mmekọrịta gị na onye ọ bụla iji hụ na ha ghọtara akụkụ niile nke mkpọsa ọ bụla yana otu ha si emekọrịta.
Debrief - Nyochaa ihe mmụta mụtara ma tinye ha n'ọrụ na atụmatụ n'ọdịnihu mgbe emechara mkpọsa ahụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ chọghị ka m gbanwee ọtụtụ okwu iji tinye otu mmụta ahụ mụtara n'ọgbọ agha nye ndị nọ n'ime mkpọsa ahịa. Site na usoro ọ bụla nke usoro a na-eduga na mkpọsa na ịkọwapụta mgbe ọ gasịrị, a na-elekwasị anya na iji akụ na ụba rụọ ọrụ nke ọma, na-etinye ha nke ọma, wee na-agbaso itinye ihe mmụta ahụ n'ọrụ.
Enwekwara ndị isi a na-adịghị ahụ anya ebe a nke na-ekwesịghị ịmara. Ọ bụrụ na nke a bụ otu ị si jikwaa ngalaba ahịa na mmefu ego gị, mkpọsa ọ bụla ga-adaba na ebumnuche nke nzukọ a. O juru anyị anya na ọtụtụ ndị ahịa anyị gwara anyị ka ha rụọ nke na-anaghị arụ dozie na uru bara uru nye nzukọ ahụ. Ọ bụrụ na ọ naghị enyere gị aka - kwụsị ime ya!
Tags: oke nweJocko WillinkLeif Babinakwụkwọ ahịanavy akàràọgụgụagụakàrà
Wipster: Video Review na Ihu nyiwe